Fikambanana « Saina » : Mitaky tsy misy fepetra ny Îles Esparses -
AccueilSongandinaFikambanana « Saina » : Mitaky tsy misy fepetra ny Îles Esparses
Fikambanana « Saina » : Mitaky tsy misy fepetra ny Îles Esparses
Nipoitra tamin’ny fahanginany ny fikambanana “Saina”, na ny Solidarité et Action des Intellectuels pour Notre Avenir. Araka izany, nanatanteraka fihetsiketsehana tamin’ny alalan’ny fitokonana sy filanjana sora-baventy nanoloana ny masoivohon’i Frantsa ity fikambanana ity.
Anton’izany, araka ny fanazavan’ny filoha nasionaliny, Josoa Rakotondramanana, ny hanairana ny Frantsay amin’ny tokony hamerenany tsy misy fepetra ireo nosy kely manodidina an’i Madagasikara antsoina hoe Îles Eparses. Araka ny fantatra, fitambarana nosy kely miisa dimy ity farany dia ny nosy Juan de Nova, Bassas da India, Europa, avy aty amin’ny Lakandranon’i Mozambika, ary Tromelin sy Glorieuses kosa avy aty amin’ny Ranomasimbe Indianina.
Nambaran’izy ireo tamin’izany fa tsy misy antony tokony higiazan’i Frantsa ireo nosy kely ireo, satria tsy azy ireo fa an’i Madagasikara sy ny Malagasy. Nabaribarin’izy ireo tamin’ny alalan’ny sora-baventy rahateo nanoloana ny masoivohon’i Frantsa tetsy Ambatomena ny fitakian’izy ireo tamin’ny alalan’ny hoe « An’ny Malagasy ny Îles Eparses », « Madagasikara malalaka tsy misy kolikoly » sy ny hoe « Frantsa, avereno ny Îles Eparses »…
Nambaran’ny filoha nasionalin’ny fikambanana « Saina » fa fanombohana ihany iny hetsika iny, fa hitohy kosa izany amin’ny herinandro.
Ankoatra izay, tonga teny an-toerana ihany koa ny solontenan’ny pastora Mailhol André Christian Dieu Donné, kandidà amin’ny fifidianana Filoham-pirenena laharana faha-34. Nametraka sy nanatitra ny taratasy mirakitra ny famerenana ny Îles Esparses ho an’ny Filohan’ny Repoblika Frantsay, Emmanuel Macron. Teboka efatra lehibe kosa no raiketin’ity taratasy fangatahana ho an’ny Filoha frantsay ity. Tafiditra amin’izany sy ny goavana indrindra ny vahaolana roa nivoitra tamin’ny fivoriamben’ny Firenena Mikambana, ny 12 desambra 1979 sy ny 11 desambra 1980 momba ireo nosy kely dimy ireo. Eo ihany koa ny fifanarahan’ny Firenena Mikambana mahakasika ny “Droit de la Mer”, ny 16 novambra 1973. Ny fifanarahan’ny Montego Bay ny taona 1982 mahakasika ny faritra ara-toekarena manokana izay nosoniavin’i Frantsa, ny taona 1996 ary farany ny vahaolana 1514 ny 14 desambra 1960, momba ny fanomezana fahaleovantena ireo firenena voazanaka.
Araka izany, nambaran’ny solontenan’ny kandidà laharana faha-34 tamin’izany, fa tsy sanatria akory mamaky ady amin’i Frantsa ny fitakiana ny fananan’ny Malagasy. Noho izany, miandry ny valin’ity fangatahana ity avy amin’ny Filoha Frantsay ny kandidà laharana faha-34. Na izany aza, nilaza ny solontenany fa mitohy hatrany ny tolona amin’ny fitakiana ny Îles Eparses, izay tafiditra anatin’ny programan’asan’ny kandidà Mailhol André Dieu Donné.